MACLUUMAAD: Hurricane Michael Phone Zap - Gargaarka Musiibada ee Mataanaha
Home/updates/GUDAHA: Hurricane Michael Phone Zap
Duufaanta Michael, oo hadda ah Qaybta 4, waxaa loo qorsheeyay inay noqoto duufaankii ugu xumaa ee ku dhufto Florida sanadihii 100 sano iyo waaxda Asluubta ee Florida (FDC) diido inay ka baxdo xabsiyada gobolka 15 aagag qasab ah.
Waxaan u baahanahay caawintaada inaad culeys saarna gobol kasta si aan u hubino argagax leh oo ka dhacay FCI Beaumont intii lagu jiray Hurricane Harvey dib ha u dhicin. Xeeladani waxay dhaqan gashay bishii la soo dhaafay markii North Carolina iyo Virginia laga daadgureeyay xabsiyada kahor Hurricane Florence!
Qaxitaan deg-deg ah ee dhammaan maxaabiista ku jira Xabsi Gobol kaste oo ku yaal aagga Ka-bixidda khasabka ah.
Kaydinta Biyaha iyo Cunnada xarun kasta oo ay saameyn karto korantada oo kacda.
Agaasimaha FDC ee Gobolka 1 Agaasime Angela Gordon ([Email ilaaliyo])
Telefoon - (850) 627-5511
Agaasimaha FDC ee Gobolka 2 Eric V. Hummel ([Email ilaaliyo])
Telefoon - (386) 496-6000
Xafiiska Dhexe ee Xabsiyada
Xafiiska Gobolka Koonfur-bari- (678) 686-1200
Ma jiro erey ku saabsan: FCI Marianna, FPC Pensacola, FCI Tallahassee
Markaad hesho jawaab isticmaal #EvacuateFLPrisononers iyo tweet @FightToxicPrisons & @iwoc_gnv! Lambaradu ma shaqeynayaan? Nagala soo xiriir tigidhada lambarrada sidoo kale!
Haddii aad awoodid, duub telefoonka taleefanka oo noogu soo dir email. Haddii ay been sheegaan, waxaan haysannaa caddeyn cod la duubay. (Emayl) [Email ilaaliyo])
Sidoo kale, kuma aamini karno WAAXDA Asluubta. Garyaqaannada 'Per Jailhouse' waxay ku hadlayaan talooyinka, “Haddii aad taqaanid wax maxaabiis ah oo ku sugan dariiqan duufaanka, waa muhiim to u sheeg inay buuxiyaan wixii weel ama bacaad ah BILAASH !! Xabsiyada ayaa caan ku ah bixinta maxaabiista biyo ku filan oo ay siinayaan maxaabiista haddiiba ay jiraan wax walba oo ka dambeeya biyaha wasaqeysan.
Wali Ma Leedahay Tamar? Kusoo xirir xiriiriye qoraalkan wargeysyada iyo wargeysyada aad ka fikiri karto!
Liiska Maxaabiista ee Aan Ka Baxsan Aagagga Waax-qasabka:
Xarunta Asluubta Bay
Xarunta Xabsiga ee Magaalada Citrus
Waaxda Asluubta Magaalada iyo Qeybta Bari
Xarunta Asluubta ee Gadsden
Lifaaqa Xannaanaynta Khaliijka
Asluubta Degmada County
Machadka Asluubta Xoriyadda
Apalachee Correctal Institutional, Qeybta Bari
Machadka Asluubta Jefferson
UPDATE 8: 40am EST- Xaaska maxbuusku waxay soo warinaysaa in ninkaygu ku sugan yahay Jefferson CI oo ay xirtay dhammaan irridaha, waxay ka tegayaan taleefannada maalinta oo dhan si ay noola sii xiriiraan. inuu qof walba u sheego inuu yaqaan inuu biyo ku buuxiyo wax kasta oo ay karaan.
Xabsiga Levy County
Machadka Asluubta Okaloosa iyo Xerada Shaqada
Hay'ada Asluubta Taylor iyo Xerada Shaqada
Wakulla Asluubta Wakulla
Hay'adda Asluubta Walton
Xarigga Jareelka Franklin County (Xuquuqda Xeebta) Taleefoon: + 1 850-670-8500